DataNumen: फिर्ती नीति
घर फिर्ता नीति
हामी हाम्रा उत्पादनहरू र सेवाहरूको गुणस्तरसँग यत्तिको विश्वस्त छौं कि हामी तपाईंको खरीदको 30० दिन भित्रमा तपाईंलाई निम्न तीन ग्यारेन्टीहरू प्रदान गर्दछौं, यो सुनिश्चित गर्न कि तपाईं १००% संतुष्ट हुनुहुन्छ।
हामी प्रस्ताव सबै भन्दा राम्रो डाटा रिकभरी उत्पादनहरू र विश्वमा सेवाहरू। यसैले हामीले हाम्रो सिर्जना गरेका छौं उत्तम रिकभरी ग्यारेन्टी ™ - हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं हाम्रो उत्पादनहरू र सेवाहरूले तपाईंको क्षतिग्रस्त फाइल, प्रणाली वा हार्डवेयरबाट अधिकतम डाटा रिकभर गर्नेछन्। यदि तपाइँले एउटा उपकरण फेला पार्नुभयो जुन हाम्रो भन्दा बढि डेटा पुनःप्राप्त गर्न सक्छ, हामी तपाइँको अर्डर पूर्ण फिर्ता गर्नेछौं!
यो ग्यारेन्टीले हाम्रो नेतृत्व भूमिका र हाम्रा ग्राहकहरु प्रति प्रतिबद्धता पुष्टि गर्दछ। हामी पहिलो र केवल डाटा रिकभरी कम्पनी हौं जसले त्यस्ता पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ, जुन हाम्रो उत्पादनहरूमा ठूलो विश्वास प्रदर्शन गर्दछ।
अधिक विस्तृत जानकारीको लागि, कृपया क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
ग्यारेन्टी खरीद गर्नु भन्दा पहिले प्रयास गर्नुहोस्
हाम्रो सबै उत्पादनहरू एक-पूर्व-खरीद मोड मा बेचिन्छ। त्यो हो, तपाईं डाउनलोड गर्न र डेमो संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको भ्रष्ट फाइल पुन: प्राप्ति गर्न। यदि फाईल पुन: प्राप्ति योग्य छ भने, डेमो संस्करणले बरामद सामग्रीको पूर्वावलोकन देखाउँदछ, वा प्रदर्शन फाईल, वा दुबै उत्पादन गर्दछ। डेमो संस्करणको नतीजाको आधारमा, तपाईले चाहानु हुने डाटा तपाईलाई फिर्ता लिन सकिन्छ कि हुँदैन भनेर जान्न सक्नुहुन्छ।
त्यसो भएपछि, तपाईंले पूर्ण संस्करण खरीद गरेपछि, यदि पूर्ण संस्करणले तय गरेको फाईल डेमो संस्करणको नतिजासँग मेल खाँदैन भने, हामी तपाईंको अर्डर फिर्ता गर्नेछौं।
100% संतुष्टि ग्यारेन्टी
जे होस् माथिको दुई ग्यारेन्टीहरू सँधै तपाईंलाई उत्तम र मि भन्ने सुनिश्चित गर्दछost सन्तोषजनक रिकभरी नतिजा, हामी १०% सन्तुष्टि ग्यारेन्टी प्रदान गरेर, अझ एक कदम अगाडि जान्छौं। यदि कुनै कारणवश, तपाईं उत्पादन किन्नुभएको उत्पादन वा सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न, त्यसोभए तपाईं पूर्ण फिर्ती पाउनुहुनेछ।
नोट: तपाईंले विवरणमा फिर्तीको कारण प्रदान गर्न आवश्यक छ। यदि आवश्यक छ भने, मूल भ्रष्ट फाइल पनि प्रमाणीकरण उद्देश्यको लागि मात्र आवश्यक छ। तपाईंको फाईल र डाटा १००% गोप्य राखिनेछ। हाम्रो हेर्नुहोस् गोपनीयता नीति थप विवरणहरूको लागि। यदि आवश्यक छ भने, हामी ग्यारेन्टी गर्नको लागि हामी तपाईंसँग एनडीएमा हस्ताक्षर गर्नेछौं।